Uyilo lwentengiso yoyilo lokugcina iplanethi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
La intengiso yoyilo lwasentlalweni ukusindisa iplanethi sisixhobo esikhulu njengesixhobo se fikelela kubantu abaninzi usebenzisa intengiso Njengeqabane, intengiso ngokungathandabuzekiyo iyakwazi ukuguqula imiyalezo ekuhlaleni ibe yinto enomtsalane ngakumbi kwaye ibethe, iyenze Iinjongo zendalo zuza amandla ngobugcisa.
Fumanisa ukuba ungakwenza njani oko dibanisa ubugcisa / uyilo / intengiso ngezinto zentlalo abafuna ukubeka ecaleni umbono wokuthengisa imveliso kodwa sibonise inyani kwezentlalo ngobuchule bokwenza izinto. Imikhankaso eluhlaza yazo zonke iintlobo ukukhulisa ulwazi malunga neengxaki ezikhoyo ezinxulumene nekhaya lethu, uMhlaba.
Intengiso ibisoloko isetyenziselwa ukusithengisela imveliso entsha ngeendlela ezahlukeneyo kunye neendlela zokufikelela kumsebenzisi, ubuchule kunye nobugcisa kunye nentengiso babonelele ngale ndlela izisombululo zoyilo ngomtsalane omkhulu kumsebenzisi ngenxa yamandla ayo abonakalayo abonakalayo.
Ukusuka ekuthengiseni imveliso ukuya ekuthengiseni umbono
Sibeke ecaleni umbono wokuthengisa imveliso kwaye sigxile kumbono wokuthengisa / wokunxibelelana nothotho lweembono, kule meko izimvo zendalo nezentlalo Baza kusebenzisa intengiso ngendlela efanayo neenkampani kodwa becinga ngokufikelela kumsebenzisi ukuba angathengisi uhlobo lwamva nje lweemoto kodwa ndikufundise malunga nokuziphatha okuthile. Kukho imikhankaso emininzi eqhutywa nayo Iinjongo zentlalo zazo zonke iintlobo, isuka e silwe nomhlaza de ugcine amahlathi ekugawuleni okungakhethi.
Kwisindululo esisibona ezantsi sizifumana ngaphambili umfanekiso oyila kakhulu nge Isiphumo somzobo ongenasiphako. Ukuyiqonda ngcono igrafu kufuneka usibuze yintoni ingxaki ofuna ukuyidlulisaKule meko umxholo wokuwisa imithi. Ndiyazi Inxulumene nobomi bomntu (imiphunga) namahlathi ibonisa indlela egawulwe ngayo imithi kwaye ngenxa yoko itshabalalisa imiphunga yethu.
Omnye wemibutho ogqame kakhulu ukusetyenziswa kwentengiso njengebango ukufikelela kubantu abaninzi ngu WWF. Ngokusebenzisa izindululo zemizobo ebonisa zonke iintlobo ze iingxaki zangempela ngendlela yokuba ifuna ukudala uvelwano kunye nokwenza uvakalelo kumsebenzisi Phambi kolu hlobo lweengxaki zendalo.
Kwigrafiki engezantsi sibona indlela eyilwa ngayo iWWF intengiso elungiselelwe amaxesha Mostrando amandla eendaba ezentlalo kunye namandla ayo okufumana inkxaso kwezi ntlobo zezizathu. Umyalezo ofanayo utolikwe ngendlela yoyilo kwaye, kule meko, indlela yeemvakalelo.
Omnye we Abameli abakhulu njengabakhuseli beplanethi ngumbutho Ukuncipha, nabo basebenzisa uyilo kunye nentengiso njengendlela yokufikelela kubasebenzisi abaninzi.
Sibona i umkhankaso wokuthengisa umnxeba onomdla kakhulu "Abahlali bemozulu" into eyenziwa leli phulo kukubonisa umsebenzisi ingxaki ye Ukuphathwa gwenxa xa ujongene neengxaki zokusingqongileyo yabantu ababini abazimiseleyo. Siyayibona imifanekiso kwaye sigwebe ukuba zichanekile na okanye hayi.
Eli phulo licela abasebenzisi ukuba bavote ngubani oyena mntu ukhohlakeleyo kwimozulu. Ukuba ufuna ukuvotela i-villain yakho oyithandayo, kufuneka ungene kwifayile ye- web.
Babonisa Abalinganiswa babini bokwenyani kunye nezinye ezimbini ezingezizo njengenxalenye yephulo.
Kule meko ulwimi lusetyenzisiwe dlulisa umyalezo wentlalo ngumzekeliso, zisibonisa imifanekiso ebabazekayo kunye umbono onobuchule obunomdla kakhuluNgaphandle kwamathandabuzo, yiprojekthi enkulu yoyilo enesiseko esiqinileyo sentlalo.
Intengiso inokuba ngumlingani wethu omkhulu xa isizathu sifuna ukuzama kuzuza ihlabathi elingcono lomntu wonke. Intengiso, ubugcisa kunye noyilo ngesandla tshintsha umhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Intengiso yoyilo lwasentlalweni ukusindisa iplanethi